Ethnic Nationalities Voice တိုင်းရင်းသားအသံ: January 2009
Wed 21 Jan 2009, လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီ
မြန်မာစစ်အစိုးရ သာသနာရေးဝန်ကြီးမှ အဆင့်မြင့်အရာရှိများက ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်း တည်ရှိရာနေရာကို သိရှိလိုသည့်အတွက် မော်လမြိုင်မြို့ပေါ်က စီးပွားရေးသမားတစ်ဦးကို စေလွှတ်ပြီး ဝင်းစိန်တောရမွန်ဆရာတော်ကို သွားရောက်မေးမြန်းခိုင်းသည်။
အကယ်၍ သူတို့သိချင်သည့် ခေါင်းလောင်းတည်ရှိမည့်နေရာကို မွန်ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာ သဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ ဘဒ္ဒန္တကေသရက ပြောပြပေးနိုင်လျှင် လက်ရှိဆရာတော် တည်ထား ကိုးကွယ်နေသည့် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး လျောင်းတော်မူဘုရားကြီးကို အပြီးသတ် ဆောက်လုပ်ပေးသွားမည်ဟု သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဆိုသည်။
သို့သော်လည်း ဆရာတော်ဘုရားအနေဖြင့် ၄င်းတို့သိချင်သော အကြောင်းအရာနှင့် ပတ် သက်ပြီး တစ်စုံတစ်ရာ ပြောခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ လျောင်းတော်မူဘုရားကြီးကိုလည်း ဆရာတော် ရဲ့အစွမ်းအစဖြင့် တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
မွန်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တစ်ဦး၏အဆိုအရ ယခုကဲ့သို့ သာသနာရေးဝန်ကြီးမှ ၄င်းဓမ္မ စေတီခေါင်းလောင်းအကြောင်းမေးမြန်းရခြင်းမှာ အရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှ ဗိုလ်ချုပ် သူရစစ်မောင်နှင့် အခြားနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ ရဟတ်ယာဉ်အက်စီးဒန်းဖြစ်ပွား ပြီးနောက် ဗိုလ်ချုပ်သူရစစ်မောင်၏ ရုပ်အလောင်းကို ရှာဖွေမတွေ့သည့်နောက်ပိုင်းတွင် ဝင်းစိန်တောရဆရာတော်မှ ၄င်းရုပ်အလောင်းတည်နေရာကို လမ်းညွန်းခဲ့သည်။
“အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကနေ ကျောက်တလုံးဆရာတော်ကို ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်း အ ကြောင်း လာမေးတာဟာ မွန်အမျိုးသားနေ့အတွက် ပို့(စ်)တာ (ဆိုင်းဘုတ်) နဲ့ ဆက်စပ် နေလားတော့ မပြောတတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့အနေနဲ့ ပို့(စ်)တာအတွက် ဓမ္မစေတီ ခေါင်းလောင်းကိုပဲ ထည့်မယ်ဆိုတာ အားလုံးက သိနေပြီးသားပဲ။ တချို့နေရာမှာဆိုရင် ဆိုင်းဘုတ်တောင်တင်ထားပြီးပြီ” ဟု ၄င်းမွန်နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦးက ပြောပြသည်။
(၆၂) ကြိမ်မြောက် မွန်အမျိုးသားနေ့အတွက် ပို့(စ်)တာ (ဆိုင်းဘုတ်) ကို ဓမ္မစေတီခေါင်း လောင်းဖြင့် ပုံဖော်ထားသည်။ ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းရုပ်ပုံဖြင့် လက်ကမ်းစာစောင်နှင့် အင်္ကျီများထုတ်ရန်လည်း စီစဉ်ထားသည်။
ဝင်းစိန်တောရဆရာတော်နှင့် နီးစပ်သူတစ်ဦး၏ ပြောပြချက်အရ “ဆရာတော်ဘုရားကို လာရောက်မေးတာ ခဏခဏတွေ့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့် တာဝန်ရှိသူတွေက သူတို့ကိုယ်တိုင် လာတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့က သူတို့လူတွေဖြစ်တဲ့ ဒီမော်လမြိုင်မြို့က စီိးပွားရေး သမား ဦးကျော်ဝင်းကို စေလွှတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် လာမေးဖို့ခိုင်းတဲ့သူကိုတော့ မသိဘူး၊ သေချာတာတစ်ခုကတော့ အစိုးရဌာနက တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်တာတော့ သေချာတယ်’’ ဟု ပြောသည်။
ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းသည် ရွှေတိဂုံစေတီသို့ လှူဒါန်းသည့်ခေါင်းလောင်းကြီးများအနက် ပထမဆုံးခေါင်းလောင်းဖြစ်ပြီး စောက် ၁၂ တောင်၊ ကြေးပိဿာချိန် တစ်သိန်းရှစ်သောင်း တန်ချိန်အရဆိုလျှင် (၂၉၀) တန်ရှိသည်ဟု နိုင်ခင်မောင်လေးရေးသားသည့် တိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်နေသည့် မွန်တို့၏မြို့ပြနိုင်ငံများတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ခေါင်းလောင်းမှာ ၁၅ ရာစုက သွန်းလုပ်ခဲ့သော ခေါင်းလောင်းဖြစ်ပြီး မွန်ဘာသာအားဖြင့် ‘အပိန္နသော်’ ဟု ဘွဲ့အမည်ပေးထားသည်။
ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၆၀၈ တွင် ပေါ်တူဂီလူမျိုး ဖိလစ်ဒိုဘရစ်တိုက ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကို အမြှောက်သွန်းလုပ်ရန် ဖောင်ဖြင့် သန်လျင်သို့ သယ်ဆောင်စဉ် ဒေါပုံမြစ်အကူးတွင် ဖောင် နစ်ပြီး ခေါင်းလောင်းကြီး ရေထဲနစ်မြုပ်သွားသည်မှာ ယနေ့ထက်တိုင်ဖြစ်ပါသည်ဟု နိုင်ခင်မောင်လေးရေးသားသော တိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်နေသည့် မွန်တို့၏မြို့ပြနိုင်ငံများစာအုပ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
On this day of January 31, 2009, which is the 60th anniversary of the Karen people’s war of resistance, I would like to wish all of you to be full of health and cheers. First, I would like to say in honor of you - the KNLA officers, NCOs, the rankers and all the Karen people - that I am proud of your faithful participation in the grand struggle of the revolution. Further, I would like to say that I am proud of and place on record the sacrifices of lives, blood and limbs you have made.
Though the Karen people had lived, from time immemorial, in peace and freedom with the other indigenous nationalities in Burma, they have lost their freedom and rights under the oppression of the chauvinists. For the Karen people to regain their basic rights, the Karen patriotic leaders ledademonstration of the Karen people in towns and cities all over the country, on February 11, 1948. The demonstrators held placards bearing4demands, which were - (1) Give Karen country at once; (2) Show at once equality between the Karen and the Burman; (3) We do not want civil war; (4) We do not want racial strife. The AFPFL Party in power not only ignored totally the demands of the Karen people but started military attacks against the Karen civilians and KNU headquarters, in an attempt to wipe out totally the Karen people’s movement by force, and thus, the Karen people had to take up arms in self-defense and start armed resistance.
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ 21 ဇန်န၀ါရီ 2009 ခိုင်လင်း(မေဃ၀တီ)
၁၉၉၀ ပြည့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်ကို အနိုင်ရပါတီအား အဘယ်ကြောင့်အာဏာမလွဲပေး ဘဲနေရ သနည်း။ စစ်အုပ်စုအနေဖြင့် အာဏာကို ဆက်လက်ဆုပ်ကိုင် လိုခြင်းတစ်ခုတည်း တော့ မဖြစ်နိုင်ချေ။ အာဏာလွှဲပြောင်း မပေးနိုင် ခြင်းအကြောင်းအရာများစွာထဲက အဓိက ကျောရိုး တခု(သို့မဟုတ်)အချက်တခုရှိသည်။ ယင်းအချက်သည် နအဖ(န၀တ)စစ်အုပ်စုအတွက် သေရေးရှင် ရေးတမျှအရေးကြီးသည်။ (ဤနေရာ၌ တပ်မတော်သားများကို မဆိုလိုပါ။ တပ်မတော် သားများ အနေနှင့်လည်း တပ်မတော်နှင့် နအဖ(န၀တ)သည် သီးခြားဆိုသည်ကို သဘောပေါက်ရန် အရေးကြီးသည်။ စစ်တပ်ကို ခုတုံးလုပ်၍ လူတစုက သူတို့ဆန္ဒအတိုင်း လုပ်ချင်သလိုလုပ်၍ တဖက်မှာ နအဖ(န၀တ)နှင့် တဘောတည်း ပုံစံမျိုးလုပ်ဆောင်နေသည်ကို သတိချပ်သင့်သည်။ စကားချပ်)
နအဖ(န၀တ)သည် အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းက ပြည်သူ့အာဏာကို ပြည်သူ့လက်ထဲ ပြန်အပ်၍ ၄င်းတို့အနေဖြင့် စစ်တန်း လျားကို ပြန်မည်ဟု ကတိပေးခဲ့ပါသည်။ အမှန်ကလည်း သူတို့ပြန်မည်ဟုပြောဆိုခြင်းသည် သူတို့မျှော်လင့်ထားသော (တစည) သေချာပေါက်နိုင်မည်ဟု တွက်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည် ။ အကယ်၍ ၁၉၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲသည်(တစည) သာ နိုင်ခဲ့ပါက (တစည) အာဏာလွှဲ၍ စစ်တပ်သည် စစ်တပ်လျားကို ပြန်မှာသေချာသည် ။ ဤကဲ့သို့ကောက်ချက်ချ ရခြင်းသည် နှစ်နှစ်ဆယ်ကာလ၏ အခင်းအကျင်းအရကောက်ချက်ချခြင်းဖြစ်သည် ။ လက်ရှိအခြေအနေအရလည်း နအဖ(န၀တ) အနေဖြင့် (တစည) ကို ကျားကန်ပေးနေသည်ကို သတင်း အချက်အလက်များအရ သိရသည်။ သို့သော် နအဖ(န၀တ) မျှော်လင့်ထားသလို ဖြစ်မလာဘဲ အမျိုးသားဒီမိုက ရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က အပြတ်အသတ်အနိုင်ရခဲ့သည့်အခါ နအဖ(န၀တ)အနေဖြင့် ဗြောင်ပေးထား သည့် ကတိကို ဗြောင်ဖျက်ခဲ့ရသည် ။ ဘာကြောင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို အာဏာမလွှဲ ပေးချင်ရသနည်း။ အာဏာအပေါ်မှာသာယာ၍ သို့မဟုတ် အာဏာကို ဆက်လက် ဆုပ်ကိုင်လိုခြင်း ကြောင့်ဖြစ်သည်ဆိုလျှင် ယင်းတခုတည်းကြောင့်တော့မဖြစ်နိုင် ။ ယင်း၏နောက်ကွယ် မှာ ဘာတွေရှိသနည်း။ လက်ကုန် နှိုက်ကြည့်ရန်လိုလာသည်။ အချို့က ချပြသည် ။ မရဲတရဲ ။ ကျနော်လည်း မရဲတရဲ ၂၀၀၂ တုန်းက မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်မှာ ပါးပါးလေးချပြဖူးသည် ။ ကျနော်က ယင်းဆောင်းပါး တွင် “မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပကတိတည်ရှိနေသော ပြဿနာသည် အမျိုးသားရေး ပြဿနာဖြစ်သည် ။ ယင်း အမျိုးသားရေးပြဿနာအား နိုင်ငံရေးအရဖြေရှင်းမှသာလျှင် ပြေလည်သွားမည် ဖြစ်၏ ။ (၁၉၉၀)ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲသည် ပြည်သူ့အာဏာအား ပြည်သူ့ထံအပ်နှင်းရုံသက်သက် မဟုတ်ဘဲ အမျိုးသားရေးပြဿနာအား နိုင်ငံရေးအရ မဖြေရှင်း လိုသောကြောင့် ပြည်သူ့အာဏာအား မအပ်နှင်းဘဲ ငြင်းဆန်နေခြင်း ဖြစ်၏ ။ စစ်အုပ်စုသည် အမျိုးသားအသီးသီးတို့၏ တန်းတူရေးနှင့်ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိရေးကိုမလိုလား သည်မှာသမိုင်းက သက်သေပြလျက်ရှိသည်။ အကယ်၍ အမျိုးသားရေးပြဿနာအား မဖြေရှင်းဘဲ အာဏာပိုင်ဆိုင်ရေးတခုတည်း ဆိုလျှင် အောင်နိုင်ရေးပါတီဖြစ်သော (NLD) လက်ထဲသို့ အာဏာလွှဲပြောင်းလိုက်မည်ဖြစ်၏။ ယခု (၁၉၉၀)ပြည့်နှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ၏ အဖြေသည် အာဏာရရှိရေးသက်သက်မဟုတ်သည်မှာ ထင်ရှားသည်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်သည် အမျိုးသားရေးပြဿနာကို နိုင်ငံရေးအရအဖြေရှာမည်မှာ သေချာသောကြောင့် စစ်အုပ်စုအနေဖြင့်ငြင်းဆန် နေရခြင်းဖြစ်၏” ဟူ၍ အခြားအကြောင်းအရာရေးရင်း ကျနော်ကောက်ချက် ချရေးပြခဲ့ဖူးသည်။ တချိန်ချိန်ယင်းအကြောင်း အရာလေးကို သီးသန့်ဆောင်းပါးတပုဒ်ရေး မည်ဟုစိတ်ကူးခဲ့သော်လည်း ပြန်လည်အမှတ်မရသဖြင့် ကျနော်မရေးဖြစ်ခဲ့ပါ။
တိုက်ဆိုင်စွာဖြင့် နာမည်ကျော်စာရေးဆရာတဦး၏ ဆောင်းပါးကို ဖတ်ဖြစ်မှ ယင်းအကြောင်း အရာကို ပြန်လည်သတိရ၍ ရေးဖြစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆရာ၏ ဆောင်းပါးအနှစ်ချုပ်မှာ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့် တစ်ထစ်လျှော့ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဆရာလေသံအရ ပြောရရင် ပညာရှိလေးများကဆိုသည့်အကြောင်း ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့် တစ်ထစ်မက လျှော့လာလိုက်သည်မှာ နောက်ဆုံးလျှော့စရာမရှိ၍ ဦးလွင်ပုဆိုးသာ ကျန်တော့သည့်အကြောင်းစသည် အားဖြင့် ရေးထားပါသည် ။ ကျနော့်အနေနှင့် ဆရာအား တိုက်ခိုက်လို၍ ဤဆောင်းပါးကို ရေးသည်မဟုတ်ပါ။ ပညာရှိလေး များဆိုသည့် ဆရာ့စကားကိုလည်း ကျနော့်ကို ရည်ရွယ်သည်မဟုတ်ပါ။ မည်သူအား ရည်ရွယ်သည်ကိုကျနော်သိသည်။ သို့သော် ယင်းကိစ္စ အဓိကမဟုတ် ။ အဓိက ဖြစ်နေသည့်အကြောင်းအရာကို သာဆုပ်ကိုင်၍ အထက်မှာကျနော် ပြောခဲ့သည့် အတိုင်း တိုက်ဆိုင်၍သာ ဥပမာအဖြစ်ပြရင်း ရေးသားရခြင်းဖြစ်ပါသည် ။ ဆရာညွန်းသော ပညာရှိလေးများထဲမှတယောက် ပြောသော စကားသည် န၀တ (နအဖ) မှ အာဏာမလွှဲပြောင်းပေးရေး၏ အချက်အတချက်ဖြစ်သည်။ ယင်းအချက်သည် ကျနော်အထက်မှာ တင်ပြခဲ့သည့် ၂၀၀၂ ခုနှစ်က ရေးခဲ့ဖူးသည့် ဆောင်းပါးကောက်နုတ်ချက်နှင့် အနှစ်သာရအားဖြင့် တူနေသည်။ ယင်းအကြောင်းအရာကို ဆွဲဆန့်၍ ယခုဆောင်းပါးကို ကျနော်ရေးရခြင်းဖြစ်သည်။ (ဤနေရာ၌ကျနော်ညွန်း ဆိုသော ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ နာမည်အား မထည့်ရေးသည်ကို နားလည်ပေး စေချင်သည်။ ၄င်းပုဂ္ဂိုလ်များအား နာမည် မထည့် ရေးသော်လည်း စာဖတ်နှံ့စပ်သူများအနေဖြင့် အဖြေရှိပါသည်။ စကားချပ်။ )
ယင်းအချက်ကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့် လျှော့ပေးလျှင် အာဏာလွှဲပြောင်းပေးခြင်းကို ရရမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းအချက်ကား အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ တိုင်းရင်းသားများ အပေါ်ထားရှိသည့်သဘောထားပင်ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့ချုပ်အနေနှင့်လည်း တိုင်းရင်းသားရေးရာနှင့် ပတ်သက်၍ ယခုကဲ့သို့ ခိုင်မာစွာရပ်တည်နေရခြင်းသည် လွတ်လပ် ရေးနှင့်ထပ်တူ ဖြစ်ပွားလာခဲ့သော ပြည်တွင်းစစ်ကို အဆုံးသတ်စေလို၍ဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့်ပြောရလျှင်လွတ်လပ် ရေး နှင့်ထပ်တူ အစိုင်အခဲအဖြစ်တည်ရှိနေသော အမျိုးသားရေးပြဿနာကို နိုင်ငံရေးအရဖြေရှင်းလို၍ ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့ချုပ် ၏ ရပ်တည်ချက်သည် ပင်လုံအပေါ်သစ္စာဖောက်မှုများကို ပြန်လည်ကုစားခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ ဦးဝင်းတင် လွတ်လာပြီး နောက် မီဒီယာ (RFA) နှင့် အင်တာဗျူးသည့်အခါ၌လည်း ဗမာအမျိုးသား များနှင့် ထပ်တူ ကျန် အမျိုးသားများသည်လည်း နိုင်ငံရေးအရ တန်းတူအခွင့်အရေးရှိကို ရှိရမည်ဟု ပြောကြားခဲ့သေးသည်။ “နိုင်ငံရေးအရ တန်းတူရေး” ဆိုသည့်စကား သည် ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှသည် ယနေ့ကာလအထိ အာဏာသိမ်း စစ်ခေါင်းဆောင်တစုအနေဖြင့် နာနာကျင်ကျင် ခါးခါးသီးသီး အပြင်းအထန်ငြင်းဆန်နေခဲ့ကြသည်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်၏ ဟိုမှာဘက် ပါလီမန်ခေတ်မှာလည်း နိုင်ငံရေး အရတန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်း ခွင့်ရှိခဲ့သည်မဟုတ်ပါ။ ၁၉၆၂ အလွန် ကာလများနှင့် နှိုင်းယှဉ်၍ ကောင်းနေခြင်းသာဖြစ်သည်။ ပါလီမန်ခေတ်သည် အနူထဲက လူချော။
ဒီမိုကရေစီအင်အားစုကြားမှာလည်း အချို့ပုဂ္ဂိုလ်များသည် တိုင်းရင်းသားများအနေဖြင့်လည်း တစ်ထစ်လျှော့တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ လိုအပ်ကြောင်း ဆွေးနွေးချပြသည်ကို နယ်စပ်မှနေစဉ် ကျနော်ကြုံခဲ့ရဖူးသည်။ တိုင်းရင်းသားများ၏ တစ်ထစ်လျှော့ တိုက်ပွဲဝင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကလည်း တစ်ထစ်လျှော့ရန် အကြံပေးခြင်းသည် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော် တခုတည်ဆောက်ရေးတခုကိုသာ ကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပါလီမန်ခေတ်သည်လည်း ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ တိုင်းရင်းသားများ၏ နိုင်ငံရေးအရတန်းတူရေးနှင့်ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိခဲ့ပါသလား။ ပြည်တွင်းစစ်ရော မရှိဘဲနေခဲ့ဖူး ပါသလား။ ခေတ်အဆက်ဆက် အုပ်ချုပ်သူများအနေဖြင့် ပင်လုံကို ကျောခိုင်းသစ္စာဖောက်ခဲ့ခြင်း၏ ရလဒ်သည်တိုင်းပြည် မတည်မငြိမ်ဖြစ်ပြီး ကုန်းကောက်စရာမရှိသော နိုင်ငံအဖြစ် ကြွင်းကျန် ရစ်ခဲ့ခြင်းသာ အဖတ်တင်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံ နိုင်ငံရေးအရ တန်းတူရေးနှင့်ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိရေးစသဖြင့် အဖွဲ့ချုပ်၏ နိုင်ငံရေး ရပ်တည်ချက် သို့မဟုတ် တိုင်းရင်းသားများအပေါ် အဖွဲ့ချုပ်၏ သဘောထားသည် ယနေ့အချိန်ထိ မပြောင်းလဲသေးပါ။ ထို့အတူ စစ်အုပ်စုသည်လည်း ၁၉၉၀ ပြည့်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို အသိအမှတ ပြုမည်မဟုတ်ပါ။ အသိအမှတ်ပြုသည့်တိုင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ တိုင်းရင်းသား များနှင့်ပတ်သက်သည့် နိုင်ငံရေးရပ်တည် ချက်တစ်ထစ်မလျှော့သမျှ အဖွဲ့ချုပ်အား အာဏာအပ်နှင်း မည်မဟုတ်ပါ။ ဆိုလျှင် အဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့် ၁၉၉၀ရွေးကောက်ပွဲ အသိ အမှတ်ပြုရေးနှင့် အာဏာ ရရှိရေးအတွက် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအပေါ်ထားရှိသည့်သဘောထား သို့မဟုတ် နိုင်ငံရေးရပ် တည်ချက်ကို ပြောင်းလဲပစ်မည်လား။ အဖွဲ့ချုပ်သည် အာဏာရယူရေး တခုတည်းသက် သက်မဟုတ်ဘဲ အမျိုးသားရေးပြဿနာများအား နိုင်ငံရေးအရဖြေရှင်းရန် စိန်ခေါ်မှုများဖြင့် တိုးဝင် လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းကြောင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့် တိုင်းရင်းသားပြည်နယ် များတွင်လည်း အောင်ပန်းဆင်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းကြောင့်ပင် ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်ကို ထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့ပြီး တိုင်းရင်းသားပါတီများနှင့်လက်တွဲ၍ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (CRPP) ကို ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
နအဖ (န၀တ) အနေဖြင့်လည်း အဖွဲ့ချုပ်၏ တိုင်းရင်းသားများအပေါ်သဘောထားအား ပြောင်းလဲသင့်ကြောင်းကို ဆွေးနွေး ကောင်းဆွေးနွေးပြီး ဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော် အဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့် တိုင်းရင်းသားများအပေါ်ရပ်တည်ချက်ကို မပြောင်းလဲ ခဲ့သဖြင့် စစ်အုပ်စုသည် တိုင်းရင်းသား လူမျိုး များ၏ နိုင်ငံရေးအရတန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်လုံးဝ မပါသော ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံခံ ဥပေဒကို တရပ်ကြမ်း ရေးဆွဲခဲ့ပြီး ဖြစ်သည့်နည်းဖြင့် လူထုဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပကာ အားလုံး ထောက် ခံပါသည်ဟု လုပ်ဆောင်ခဲ့သည် ။ စစ်ခေါင်းဆောင်များအုပ်ချုပ်ရေးဟုဆိုသော်လည်း အမှန်စင်စစ် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ၏ နိုင်ငံရေးအရတန်းတူရေးနှင့်ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကို လုံးဝပစ်ပယ်လို၍ လုပ်ဆောင်လာ ခြင်းဖြစ်သည်မှာ ထင်ရှားသည် ။ တပ်မတော်ကောင်းစား ရေးမဟုတ် ။ ခေါင်းဆောင် လူတစုကောင်းစားရေးနှင့် တိုင်းရင်းသား များအား နှိပ်ကွက်ရေး။ ဆိုလျှင် တပ်မတော်တွင်းရှိ တိုင်းရင်း သားများအနေဖြင့် ဘာလုပ်သင့်သနည်း။ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်အား အာဏာမလွှဲ ပေးခြင်းသည် ၄င်းအဖွဲ့ချုပ်၏တိုင်းရင်းသားလူမျိုများ အပေါ်ထားရှိသည့်နိုင်ငံရေးသဘောထား ကို မကြိုက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ကို မမေ့သင့်ပေ။
ဇန္န၀ါရီလ ၁၉ ရက်၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်။
ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားနေသော မြန်မာအစိုးရတပ်ဖွဲ့နှင့် ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် တို့အကြား တိုက်ပွဲများတွင် ကချင်ပြည်နယ်အခြေစိုက် တပ်ရင်း၊ တပ်ဖွဲ့များမှ ရဲဘော်များ အကျအဆုံး များသော ကြောင့် မြောက်ပိုင်းတိုင်း တိုင်းမှူးက ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း မြို့ရွာများရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်းများတွင် အန္တရာယ် ကင်း ပရိတ်များ ရွတ်ဖတ်ခိုင်းနေသည်ဟု ဒေသခံများက ပြောသည်။
လွန်ခဲ့သည့်နှစ် ဇွန်လကုန်ပိုင်းမှစ၍ ယနေ့အချိန်ထိ ဖြစ်ပွားနေသည့် ကရင်ပြည်နယ် ထိုးစစ်များတွင် မြောက်ပိုင်း တိုင်း အခြေစိုက် တပ်ရင်းများမှ စစ်သားများ အကျအဆုံး များခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု မိုးကောင်းမြို့ ဒေသခံ တစ်ဦးက ယခုလို ပြောသည်။
“အခု ၂၀၀၈ ခု နှစ်ကုန်ပိုင်းကစပြီးတော့မှ အခုရက်အထိပေါ့လေ ဒီစကခ (၃) ကနေပြီး၊ စကခ(၃)က ဒီ မိုးကောင်းတပ်တည်ကိုး၊ သူက ကရင်ပြည်နယ်မှာသွားတိုက်တော့ အကျ အဆုံးများလို့ဆိုပြီးတော့မှ ဒီ ကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ မြို့တိုင်းမြို့တိုင်းမှာရှိတဲ့ ဘုန်းကြီး ကျောင်းတွေကို ပဌာန်းတွေ ရွတ်ခိုင်း တယ်၊ ပရိတ်တွေရွတ်ခိုင်းတယ် အန္တရာယ်ကင်းအောင် လို့ပေါ့လေ ပြောရမယ်ဆိုရင် အကျအဆုံး မများအောင်လို့ပေါ့။”
ကချင်ပြည်နယ်ရှိ မြို့အတော်များများနှင့် စကခ(၃) လက်အောက်ခံ တပ်ရင်းများ၏ အခြေစိုက်ရာ မြို့များ ဖြစ်သော မိုးကောင်း၊ နမ္မတီး၊ မြစ်ကြီးနားမြို့များရှိ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းများတွင် အဓိကထား၍ ရွတ်ဆိုခိုင်း နေသည်ဟုလည်း ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးကောင်းမြို့သည် မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် လက်အောက်ခံ စစ်ဆင်ရေး ကွပ်ကဲမှု ဌာနချုပ် ရုံး စကခ(၃) အခြေစိုက်ရာ မြို့ဖြစ်သည်။
KNLA အထူးတပ်ရင်းအမှတ် (၁၀၃) ဌာနချုပ် စခန်းကုန်းအား မြန်မာစစ်အစိုးရ တပ်များက လွန်ခဲ့သည့် တစ်ပါတ်ကျော်က သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးနောက် မြောက်ဖက်ရှိ တပ်ရင်း (၂၀၁)၏ ၀ါးလေခီးစခန်းကို ဆက်လက် ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်လျှက်ရှိသည်။
ဖို.ဝိန်းမြို.၊ IVY TECH COMMUNITY COLLEGE မှာပြုလုပ်မည့်တိုင်းရင်းသားပွဲတော်တဲ့၊တိုင်းရင်းသားအစစ်အမှန်၏ပွဲ တော်ဖြစ်ပါစေလို.တိုင်းရင်းသားအသံမှဆုတောင်းလိုက်ပါသည်၊
Sao Hso Hkan Hpa
His remains would be moved from the Wat Papao Shan temple at 13:00 tomorrow to the nearby Paphaeng temple to be cremated.
Born on 11 May 1938, Khun Lu joined the movement led by Sao Hso Hkan Hpa aka Tiger Yawnghwe, after it was formed on the Chiangrai border on 25 March 2005. His father Khun Ka served asaminister at the Hsenwi palace during Prince Sao Hom Hpa’s reign, when the Federated Shan States as the Shan State was then known, was stillaseparate entity from Burma. Known asabrilliant student at the Rangoon University, he had worked at the Thai embassy in Rangoon before coming to Thailand.
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အသစ် အဘိစစ်အစိုးရသည် ရွှေ.ပြောင်းအလုပ်သမားအသစ်များအတွက်အလုပ်လုပ်ခွင့်မှတ်ပုံတင်အသစ်လု ပ်မပေးတာဟာ ရက်စက်သောအလုပ်ရှင်များနှင့်လာဘ်စားသည့်ရဲများအတွက်သာအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေပြီးမှားယွင်းတဲ့လုပ်ရပ် တစ်ခုဖြစ်သည်၊
လက်ရှိထိုင်းအစိုးသည် လူ.အခွင့်အရေးအလေးပေးမှုနှင့်ရွှေ.ပြောင်းအလုပ်သမားများ၏ပြဿနာနာလည်းမှုအမှတ်ဟာသုည နီပါးဖြစ်နေသည်ကိုပြသလိုက်တာဘဲ၊လွန်ခဲ့သော အေပြီလတုန်းကထိုင်းနိုင်ငံကိုခိုးဝင်လာသော မြန်မာနိုင်ငံသား(၅၄)ယော က်အအေးခန်းပိတ်လူခဲပြီးသေဆုံးတဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုမှတ်မိရဲ.လား? အကယ်၍ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ.မှတ်ပုံတင်တင်တဲ့စနစ်ရှိခဲ့ရင်ဒီလို ဖြစ်ရပ်မျိုးဖြစ်ပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူး၊
အစိုးအနေဖြင့်အလုပ်သမားများမှတ်ပုံတင်ပိုမိုတင်လာအောင်အားပေးတဲ့အနေနဲ.သူတို.အတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခွင့် နှင့်အခြားသောသားရေးနားရေးအခွင့်အရေးများရရှိရေးကိုပိုပြီးရှင်းလင်းအောင်၊သက်သာအောင်၊လွယ်ကူအောင်လုပ်ပေးမဲ့အ စားလူအသစ်များထပ်မဝင်လာအောင်အပြစ်ပေးတဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးပါသည်၊
မှတ်ပုံတင်တင်ဖို.အခကြေးငွေများများပေးထားသော်လည် ရဲများငွေးညှစ်ခြင်းနှင့်အလုပ်သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရခြင်း များမှအကာအကွယ်များအာမခံချက်မရရှိပါ၊ထို.အတွက်ကြောင့်၊ရွှေ.ပြောင်းအလုပ်သမားအများစုကခိုးနေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုပိုပြီးသ ဘောကျပါတယ်၊ဤနည်းအားဖြင့် လာဘ်စားတဲ့ရဲများ၏အကူအညီဖြင့်လူကုန်ကူးမှုလုပ်ငန်းကိုကောင်းကောင်းဆက်လက်တ ည်ရှိနေပါသည်၊
လွန်ခဲ့သောနှစ်များတွင်ရွှေ.ပြောင်းအလုပ်သမားများလာရောက်စာရင်းတင်တဲ့အရေအတွက်ဘာကြောင့်ကျဆင်းခဲ့သလဲဆိုတာ ကိုအားနဲသောမှတ်ပုံတင်တင်တဲ့စနစ်ကရှင်းပြနေပါသည်၊(၂၀၀၄)မှာဆိုရင် ရွှေ.ပြောင်းအလုပ်သမားများတစ်သန်းကျော်လာ ရောက်မှတ်ပုံတင်တင်ခဲ့ပါသည်၊မနှစ်တုန်းဆိုရင်၊ရွှေ.ပြောင်းအလုပ်သမားများ နှစ်သန်းကျော်ရှိခဲ့ပေမဲ့မှတ်ပုံတင်လာတင်သူ အရေအတွက်ကတော့ (၅)သိန်းအထိထိုးကျသွားပါသည်၊
မှားယွင်းတဲ့စနစ်ကိုအမှားအတိုင်းချန်ထားတာဟာဆိုးသလောက်ဆိုးနေပြီ၊ရွှေးပြောင်းအလုပ်သမားအသစ်များအတွက်ပါမှတ်ပုံ တင်တင်မပေးတာကိုလည်းထပ်လုပ်အုံးမှာလား?ဒီလိုလုပ်တာဟာ လူကုန်ကူးမှုပြဿနာနှင့်အလုပ်သမားများအလွဲသုံးစားလု ပ်မှုအခြေအနေကိုပိုမိုဆိုးရွားလာဖို.ဘဲရှိသည်၊အဘိစစ်အစိုးရအနေနဲ.ဤဟာကိုမမြင်နိုင်တာဟာအလွန်ဆိုးပါသည်၊
ထိုင်းနိုင်ငံစီးပွားရေးကျဆင်းမှုနှင့်အလုပ်လက်မဲ့ရှိနေတဲ့အကြားကရွှေ.ပြောင်းအလုပ်သမားကထိုင်းလူမျိုးလုပ်တဲ့အလုပ်တွေ ကိုခိုးယူသွားမည်ဆိုတဲ့အကြောက်တရားကြောင့်ရွှေ.ပြောင်းအလုပ်သမားအသစ်များအတွက်မှတ်ပုံတင်လုပ်ပေးတဲ့ဆန်.ကျင် ချက်ကိုထိုင်းဝန်ကြီးအဖွဲ.(ကက်ဘီနက်)ကဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို.အဆင့်မြင့်အလုပ်သမားအရာရှတစ်ယောက်ကပြောပြပါသည်၊
ဤဟာကိုနာလည်မှုအကြီးအကျယ်လွဲနေတာဖြစ်တယ်လို. ရွှေ.ပြောင်း အလုပ်သမားအခွင့်အရေးတိုက်ပွဲဝင်နေသူ Somphong Sarakeaw ဆွမ်းဖေါင်းစရကဲ့ကပြောပါသည်၊ရွှေ.ပြောင်းအလုပ်သမားအများစုကထိုင်းတွေမလုပ်တဲ့ခက်ခဲသော ညစ်ပတ်သော၊အန္တရာယ်ရှိသောအလုပ်တွေကိုဘဲလုပ်နေကြပါသည်၊ဥပမာပြရရင်၊မနှစ်တုန်းက စမွတ်စာခွန်း(မဟာချိုင်း)မှာ ငါးနဲ့ပတ်သက်သောအလုပ်တစ်သိန်းခွဲလောက်ကိုခေါ်ပါတယ်၊ထိုင်းလူမျုိးတွေအယောက်(၁၂၀)ဘဲလာလျှောက်ကြပါတယ်၊အ များစုကတော့ဗမာပြည်မှာစားဝတ်နေရေးကြပ်တည်းပြီးဖိနှိပ်မှုဒဏ်မှထွက်ပြေးလာသောမွန်းလူမျိုးတွေကဝင်ရောက်လုပ်ကိုင် ကြပါတယ်လို. သူကပြောပြပါသည်၊
တရားဥပဒေမဲ့တာဟာသူတို.အတွက်ပြန်ပို.ခံရမည်ကိုကြောက်ရွ.ံခြင်း၊ကျေးကျွန်သကဲ့သို.အလုပ်လုပ်နေရခြင်း၊နှင့်ရဲများငွေ ညှစ်ခံရခြင်းတို.ကိုပိုများပြာလာစေသည်၊သူတို.နေမကောင်းရင် သည်ခံခြင်းသို.မဟုတ်မဖျားသယောင်ဟန်ဆောင်ခြင်းကလွဲ ရင်တစ်ခြားရွေစရာလမ်းမရှိပါ၊ရွှေ.ပြောင်းအမျိုးသမီးများအတွက် မုဒိန်းကျင့်ခံရခြင်းဟာအကြီးဆုံးပြဿနာဖြစ်နေပါသည်၊အ ထူးသဖြင့်၊အိမ်ဖော်အလုပ်လုပ်သူများအတွက်ဖြစ်သည်၊ကျုးလွန်ခံရသည့်အမျိုးသမီးများကရဲစခန်းမှာအမှုတိုင်ဖွင့်ပြဖို.အရမ်း ကိုကြောင်ရွ.ံနေပါသည်၊ဒီလိုဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်ကျုးလွန်သူများအားဒဏ်ခတ်မရှိတဲ့အခွင့်အရေးကိုပေးထားသလိုဖြစ်နေသည်၊တ စ်ချိန်တည်မှာပင်၊တရားမဝင်ရွှေ.ပြောင်းအလုပ်သမားများ၏ကလေးတွေကလည်းပညာမတတ်ကြီးပြင်းလာရင်ဈေးနှုန်းသက် သာသောလုပ်အားခကိုဆာလောင်နေသောထိုင်းတွေအတွက်မျိုးဆက်သစ်ကျွန်များထပ်ဖြစ်လာအုံးမည်၊
ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာက သူတို.အတွက်(ထိုင်းလူမျိုးများမှ)သနားကြင်နာတရားနှင့်ထောက်ပံ့မှုများကိုသိပ်မျှော်လင့်ချက် ထားလို.မရပါဘူး၊ထိုင်းလူမျိုးအများစုကတော့၊ရွှေးပြောင်းအလုပ်သမားများကိုရာဇာဝတ်ကောင်းတွေ၊ဗမာတွေဟာအစဉ်အလာ အရထိုင်းတွေနဲ.ရန်သူတွေဖြစ်ဆိုတာကို အစွန်းရောက်မျိုးချစ်သမိုင်းများကခေါင်းရိုက်သွင်းထားပါသည်၊
ဤဟာအားလုံးသည်ထိုင်းအတွက်မကောင်းပါဘူး၊စီးပွားရေးအရ၊အလုပ်သမားအဆင့်အတန်းကျဆင်းတယ်ဆိုတာ ထုတ်ကုန် တွေကပြည်ပတစ်နေရာသို.တင်ပို.နေရသည်၊စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ၊ရွှေ.ပြောင်းအလုပ်သမားများ၏ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုမျက်စိမှိတ် ထားခြင်းဟာ ကျနော်တို.၏နှလုံးသားကိုဖွင့်လှစ်ပြသနေသည်၊တစ်ချိန်တည်မှာပင်၊ရွှေ.ပြောင်းအလုပ်သမားလူငယ်များသည် သူတို.၏ဒေါသတရား၊သွေးခွဲခံရခြင်း၊ပညာမဲ့ခြင်းနှင့်ဘဝအခွင့်အရေးဆုံးရှံးခြင်းကြောင့်ကျနော်တို.အတွက်လူမှုရေးအချိန်ကိုက် ဗုံဖြစ်လာနိုင်သည်၊
မှတ်ပုံတင်တင်ပေးခြင်းသည် အလုပ်သမားအခက်အခဲကိုဖြေရှင်းရာမှာပထမအဆင့်ဖြစ်ပါသည်၊ရွှေ.ပြောင်းအလုပ်သမားအ သစ်များအတွက်မှတ်ပုံတင်တင်ပေးခြင်းငြင်းပယ်တာဟာ ဒီမိုကရက်ဦးဆောင်သောအစိုးရက အလုပ်သမားအခွင့်အရေးနှင့် လူသားအတွက်ဂုဏ်ပြုလေးစားခြင်းကိုစိတ်ဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ.ပျက်ကွက်နေပါသည်။
Monday, January 12, 2009့ (Bangkok Post)
Migrant workers' woes
Posted by Sanitsuda Ekachai , Reader : 530 , 05:52:49
The Abhisit government's decision not to register new migrant workers isamistake that only serves abusive employers and corrupt police.
It also shows that the present government's awareness of human rights and understanding of the migrant labour problems is close to zero.
Remember the mass suffocation tragedy last April when 54 Burmese migrant workers suffocated to death inacrammed cold-storage truck while being smuggled into Thailand? This would not have happened if we hadaregistration system that worked.
But instead of making it simpler, cheaper and easier for the workers to receive health and other welfare benefits to encourage more registration, successive governments have stuck with the punishing system to discourage newcomers.
Since paying high registration fees does not guarantee any protection from police extortion and labour abuse, the majority of migrant workers prefer to remain underground, thus keeping the human trafficking rackets alive and well with support from corrupt police.
The poor registration system also explains why the number of documented migrant workers has been falling over the years. In 2004, there were more than one million migrant workers seeking registration. Last year, the number of registered workers dropped to 500,000 while it is estimated that there are more than two million migrant workers in the country.
It is bad enough to leave the faulty system as it is. But to stop registering new migrant workers altogether? This will only worsen the situation of human trafficking and labour abuse. Too bad the Abhisit government cannot see that.
False fear is again to blame.
According toahigh-ranking labour official, Cabinet decided against the registration of new migrant workers out of fear that they would steal Thai jobs amid the sagging economy and soaring unemployment.
This isabig misunderstanding, said Sompong Srakaew, an advocate of migrant labour rights. Most migrant workers are actually doing the difficult, dirty and dangerous work shunned by Thais. Last year, for example, when Samut Sakhon province advertised for 150,000 jobs in fishery-related jobs, only about 120 Thai nationals applied, he said. The jobs were taken up by migrant workers, mostly the ethnic Mon who had fled harsh poverty and persecution from Burma.
The Cyclone Nargis tragedy will definitely increase cross-border migration, given the vast destruction of Burma's rice bowl, the Irrawaddy Delta, and the junta's paltry efforts to assist its own citizens.
The lack of legal status will heighten their fear of deportation, forcing them to put up with slave-like working conditions and police extortion. When they fall ill they will have no choice but to endure, or to turn to quacks. For migrant women, rape is one of their greatest risks, particularly those working as household help. Most victims, however, will be too fearful to press charges and risk further abuse at the police station, thus allowing the abusers to enjoy impunity. Meanwhile, the underground migrant children, robbed of the right to an education, will grow up to become another generation of modern slaves to serve Thailand's insatiable hunger for cheap labour.
Sadly, they cannot expect much sympathy or assistance. Most Thais, having been brainwashed by our ultra-nationalistic history, view migrant workers as potential criminals and Burma as Thailand's traditional enemy.
All this does Thailand no good. Economically, failing labour standards means the export orders will go elsewhere. Morally, turningablind eye to migrant workers' suffering exposes our own heartlessness. Meanwhile resentment, alienation, lack of education and life opportunities will make migrant youthsasocial time-bomb.
Only the employers and the police are happy to cash in on the illegality of the migrant workforce.
Registration is the first step to undo these labour knots. By refusing to register new migrant workers, the Democrat-led government has failed miserably to honour labour rights and humanity.